Dowlada Norway: 3000 Qoxooti ah ayaan dalkeena keeni doonaa. - NorSom News
Dowlada Norway: 3000 Qoxooti ah ayaan dalkeena keeni doonaa.
Sida lagu soo bandhigay soo jeedinta miisaaniyada sanadka 2021 ee dowlada Norway, dowlada Norway ayaa rabta in sanadka danbe ay dalkeeda keeni doonto dad qoxooti ah oo tiro ahaan gaaraya 3000 qof.
Qoxootiga ay Norway rabto inay soo qaadato ayaa laga soo qaadi doonaa xeryaha qoxootiga ee caalamka, iyada oo la raacayo xeerka qaramada midoobay ee saami-qeybsiga qoxootiga caalamka ee u baahan dib u dajinta u baahan.
Xukuumada ay hogaamiso Erna Solberg, ayaa taageero uga baahan xisbigaFrp si miisaaniyada sanadka danbe ay u meelmarto. Balse Frp ayaa horey shardi uga dhigay inaan Norway la keenin hal qof oo qoxooti ah, hadii ay taageero siinayan miisaaniyada dowlada.
Xukuumada Solberg oo ka kooban xisbiyada Høyre, Venstre iyo Krf ayaan dhag jalaq u siin soo jeedinta Frp, waxeyna taas badalkeeda soo jeediyeen in Norway soo qaadato tiro qoxooti oo ka badan tirada ay Norway qorsheysay inay soo qaadato sanadkan 2020.
Waxaa isbuucan bilaaban doono dooda baarlamaanka ee ansixinta miisaaniyada, taas oo sanad walba leh xiiso gooni ah, marka xiliyada oo kale la gaaro.
Xigasho/kilde: Regjeringen foreslår 3.000 kvoteflyktninger i statsbudsjettet.
Previous articleSweden: Xayiraad safar lagu soo rogay gabar 16 jir guur loo waday
Next articleWasiirka caafimaadka: Trump arintaas kuma raacsani.
Baarlamaanka Norway oo isku raacay mamnuucista guurka ilma adeerada/Abtiga.
Skien: 16 sano kadib, ayaa hooyadan soomaalida iyo caruurteeda lagu amray inay Norway ka baxaan.
Wasiir: Raali ahaada, mar kale ayaa waqtiga saacad la badali doonaa axada
Keydka NorSom Velg måned oktober 2020 (49) september 2020 (55) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)